समाचार - सुख्खा पाउडर मोर्टार मा काठ फाइबर को आवेदन
1. भवन जलरोधक:
◆ फाइबर मोर्टारले संरचनात्मक सेल्फ वाटरप्रूफिङ र रूफ इन्जिनियरिङजस्ता आधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधिहरूको नवीन प्रयोग र विकासको प्राविधिक कार्यसम्पादन त्रुटिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पूर्ति गर्न सक्छ।
2. संयुक्त सीलेन्ट:
◆ उत्कृष्ट पानी अवधारण, जसले चिसो समय लम्ब्याउन र कार्य दक्षता सुधार गर्न सक्छ। उच्च स्नेहकताले अनुप्रयोगलाई सजिलो र चिल्लो बनाउँछ।
◆ संकुचन प्रतिरोध र क्र्याकिंग प्रतिरोध सुधार, र सतह गुणस्तर सुधार।
◆ चिल्लो र समान बनावट प्रदान गर्नुहोस्, र बन्धन सतह बलियो बनाउनुहोस्।
3. सेल्फ लेभलिङ फ्लोर सामग्री:
◆ चिपचिपापन सुधार र एन्टी पर्सिपिटेशन additive को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
◆ तरलता र पम्पेबिलिटी बृद्धि गर्नुहोस्, ताकि पक्की कार्यको दक्षता सुधार गर्न।
◆ क्र्याकिंग र संकुचनलाई धेरै कम गर्न पानीको अवधारण नियन्त्रण गर्नुहोस्।
४. चिनाई मोर्टार:
◆ चिनाई को सतह संग आसंजन बढाउनुहोस्। यसले पानीको अवधारण बढाउन र मोर्टारको बल सुधार गर्न सक्छ।
◆ स्नेहकता र प्लास्टिसिटी सुधार गर्नुहोस्, ताकि निर्माण कार्यसम्पादन, सजिलो प्रयोग, समय बचत र लागत-प्रभावकारिता सुधार गर्न।
५. सिमेन्टमा आधारित प्लास्टरिङ:
◆ एकरूपता सुधार गर्नुहोस्, प्लास्टरिङ मोर्टारलाई लागू गर्न सजिलो बनाउनुहोस्, र एकै समयमा झर्ने प्रतिरोधी क्षमतामा सुधार गर्नुहोस्। तरलता र पम्पेबिलिटी बढाउनुहोस्, ताकि कार्य दक्षता सुधार गर्न।
◆ उच्च पानी रिटेन्सन, मोर्टारको काम गर्ने समयलाई लम्ब्याउने, कार्य क्षमतामा सुधार गर्ने, र ठोसीकरणको क्रममा मोर्टारलाई उच्च मेकानिकल बल बनाउन मद्दत गर्दछ।
◆ हावाको घुसपैठलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, ताकि कोटिंगको माइक्रो क्र्याकहरू हटाउन र एक आदर्श चिकनी सतह बनाउनुहोस्।
6. पर्खाल मोर्टार सतह पाठ्यक्रम:
◆ फाइबर प्लास्टरिङ मोर्टार पर्खाल सतह मा लागू प्रभावी ढंगले भित्ता क्र्याक रोक्न र क्र्याक प्रतिरोध र रिसाव रोकथाम को प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छ।
◆ फाइबर मोर्टार सतह पाठ्यक्रममा राम्रो निर्माण र फिनिसिङ सञ्चालन विशेषताहरू छन्। यसले मोर्टार सतहको उपस्थितिमा कुनै असर गर्दैन।
◆ फाइबरले सबैभन्दा ठूलो हदसम्म नयाँ हल्का तौलको पर्खाल सामग्रीको प्राविधिक दोषहरू पूरा गर्न सक्छ। सबै प्रकारका प्रकाश ऊर्जा-बचत पर्खाल सामग्रीहरूमा सतह क्र्याकिंग र फरक डिग्रीहरूमा अपर्याप्त अभेद्यताको दोषहरू छन्, जसले तिनीहरूको लोकप्रियता र अनुप्रयोगलाई असर गर्छ। यी पर्खाल सामग्रीहरू प्रयोग गर्दा, साथी फाइबर मोर्टार प्लास्टरिङ सतहको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले तिनीहरूको कार्यसम्पादन त्रुटिहरू पूर्ण रूपमा बनाउन र परियोजनाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ।
7. जिप्सम आधारित प्लास्टर र जिप्सम उत्पादनहरु:
◆ एकरूपता सुधार गर्नुहोस्, प्लास्टरिङ मोर्टार लागू गर्न सजिलो बनाउनुहोस्, र ठाडो प्रवाह प्रतिरोध सुधार गर्नुहोस्। तरलता र पम्पेबिलिटी बढाउनुहोस्, ताकि कार्य दक्षता सुधार गर्न।
◆ उच्च पानी अवधारण, मोर्टारको काम गर्ने समयलाई लम्ब्याउने र ठोसीकरणको क्रममा उच्च मेकानिकल बल बनाउँछ।
8. थर्मल इन्सुलेशन मोर्टार आधार:
◆ फाइबर मोर्टारले मोर्टार आधार तहलाई चिल्लो बनाउँछ, र ब्याच स्विङ लेयर बलियो, सफा, सुन्दर र समतल छ, जुन सबै प्रकारका वास्तुकला कोटिंग्सका लागि उपयुक्त छ। विभिन्न बाहिरी पर्खाल कोटिंग्स को बढ्दो फराकिलो ईन्जिनियरिङ् आवेदन मोर्टार निर्माण को लागी उच्च आवश्यकताहरु लाई अगाडि राख्छ। किनभने फाइबर मोर्टारमा राम्रो क्र्याक प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध र फ्रस्ट प्रतिरोध छ, यसले यसको इन्जिनियरिङ विशेषताहरू धेरै सुधार गर्न सक्छ, निर्माण प्रविधिको आवश्यकताहरू पूरा गर्न र निर्माण गुणस्तरलाई मौलिक रूपमा सुनिश्चित गर्न सक्छ।
◆ प्लास्टरिङ निर्माण दक्षता सुधार र नोक्सान कम। फाइबर मोर्टार यसको संयोजन र स्थिरतामा शुद्ध सिमेन्ट मोर्टार भन्दा उच्च छ। प्लास्टरिंग निर्माणको क्रममा, प्लास्टरिंग सजिलो र ढिलो हुन्छ, र मोर्टार ड्रप धेरै कम हुन्छ, जसले प्लास्टरिंग दक्षता सुधार गर्न र सामग्रीको हानि कम गर्न सक्छ।
◆ इट्टाको सतहको बाटोको निर्माण गुणस्तर सुनिश्चित गर्न यो उपयोगी छ। बेस कोर्सको रूपमा फाइबर मोर्टारको प्रयोगले ईंटहरूको सामना गर्ने बन्डिङ बल सुनिश्चित गर्न र यसको क्र्याकिंग घटनाको कमी वा मूल रूपमा हराउने कारणले इट्टा फुट्ने र खोक्रो हुने घटनालाई रोक्नको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
9. टाइल टाँसने:
◆ सुख्खा मिश्रण बिना नै मिलाउन सजिलो हुन्छ, जसले निर्माण क्षमता सुधार गर्न र लागत घटाउन सक्छ।
◆ चिसो समय लम्ब्याएर, टाइलिंग दक्षता सुधारिएको छ। उत्कृष्ट आसंजन प्रदान गर्नुहोस्।
◆ यसले बाक्लो शटक्रिट तह बनाउन सक्छ।
◆ यसमा उच्च चिपचिपापन छ।
◆ स्प्रे गरिएको कंक्रीटको प्रारम्भिक जेट वेग अन्य सामग्रीको 70% - 80% मात्र हुन्छ, जसले स्प्रे गरिएको कंक्रीटमा प्रभाव कम गर्छ, कंक्रीटको बल सुधार गर्छ र कंक्रीटको रिबाउन्ड हानि कम गर्छ।
पोस्ट समय: अक्टोबर-29-2021